साउन महिनामा कस्तो रहनेछ तपाईंको भाग्य ? हेर्नुस् राशिफल – Hamro Nepali Samachar
Home/ राशिफल/साउन महिनामा कस्तो रहनेछ तपाईंको भाग्य ? हेर्नुस् राशिफल
साउन महिनामा समग्रमा सकारात्मक महिना रहेको छ । रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँगको अन्तरक्रियाले मनोबल उच्च बनाउनेछ । महिनाको उत्तरार्धबाट र तनाव बढेको महसुस हुनेछ । व्यवसायमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ । नजिकका व्यक्तिबाट कार्यमा बाधा आउला । महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ५,७ र शुभ रङ्ग पहेँलो वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व महादेवको आरधना गरि कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
वृष राशिका लागि यो महिनामा रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । आर्थिक र व्यवसायिक समस्या समाधान हुनेछन् । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । शुभारम्भको चर्चा चल्नेछ । मित्र जनको साथ र सहयोगले उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुनेछ । सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिल्नुका साथै राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि सफलता हात पर्ने देखिन्छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ४,६ र शुभ रङ्ग कालो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विष्णु भगवानको दर्शन गरि कार्य आरम्भ गर्दा सफलता मिल्नेछ ।
यो महिना धर्मकर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । शुभकार्यको चर्चा पनि चल्नेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । अध्ययनमा रुचि जाग्नुका साथै उल्लेख्य प्रगति हुनेछ । शेयर बजार र वाणिज्य क्षेत्रबाट विशेष लाभ रहनेछ । नयाँ लक्ष्यप्राप्तिको योग देखिन्छन् । कला र मनोरञ्जनमा अभिरुचि जाग्नेछ । प्रेमसम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागिपनि श्रेष्ठ समय छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ३,९ र शुभ रङ्ग हरियो वा निलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवालयको दर्शन गरि कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
साउन महिनामा धार्मिक यात्राको योग छ । दोष थुपार्नेहरू प्रशंसा गर्न थाल्नेछन् । कामका विभिन्न अवसर फेला पर्ने छन् । ठूला व्यक्तिले तपाइको मेहनतको प्रशंसा गर्नेछन् । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ । शेयर बजारको लगानी फस्टाउनेछ । धार्मिक यात्राको योग पनि छ । ब्यापार व्यवसायबाट आम्दानी नै हुनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ३,८ र शुभ रङ्ग हरियो वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि विघ्नहर्ता गणेशजीको दर्शन, पूजा र अर्चना गरि गरेको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो महिनामा घर परिवारमा झैझमेलाको अवस्था आउला । विश्वास पात्रले भाषा परिवर्तन गर्न सक्छन् । सरकारी निकायको भय रहला, सावधान रहनुहोला । शेयर बजारको लगाले राम्रै प्रतिफल देला । महिनाको अन्त्यमा तार्किक क्षमता एवं बोलीको प्रभावले स्वरोजगार भइनेछ । सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई बिस्तारै लाभ हुनेछ । कुटुम्बबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,७ र शुभ रङ्ग रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि हनुमानजीको आरधना गरि यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
साउन महिनामा तपाईंलाई मिश्रित फल मिल्नेछ । बोलीको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गमा कमी आउनेछ । स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता रहनसक्ने देखिन्छ । १५ गतेबाट दानपुण्यका कार्यमा सहभागी भइनेछ । नोकरी गर्नेले मानसम्मान पाउनेछन् । चलाखीपूर्ण बोलीले सङ्कल्प सिद्ध हुनेछ । ठीक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,२ र शुभ रङ्ग हल्का पहेँलो वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि महाकालीको ध्यान गरि कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
भित्रैबाट मन पर्ने व्यक्तिसँगको भेटघाटले कार्यक्षेत्रमा उत्साह जगाउनेछ । कृषि क्षेत्रबाट सफलता र रमाइलो यात्रा हुनेछ । पर्यटकीय स्थलको भ्रमणले मन लोभ्याउनेछ । मठमन्दिरको भ्रमणले काम सम्पन्न गर्न थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । लामो यात्रा सुखद् र सफल हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्नेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,२ र शुभ रङ्ग कालो वा हरियो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि शिवजीको ध्यान गरि कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ हुनेछ ।
वृश्चिक राशिका लागि यो महिना लाभदायी नै रहनेछ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै सुखद् यात्राका अवसर प्राप्त हुनेछन् । विपरीत वर्ग प्रति आकर्षण बढ्नेछ । छरछिमेकमा सम्पन्न हुने धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु पर्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि सफलता मिल्नेछ । मध्य महिनाबाट आफ्नो विचार विपरित निर्णय हुन सक्छ । बाटो काट्दा वा यात्रा गर्दा सचेत हुनुपर्छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,५ र शुभ रङ्ग गुलावी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व आफ्नो इष्ट देवताको स्मरण गरि कार्य आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
धनु राशिका लागि साउन महिनामा बाहिरी गफगाफमा भुलिँदा व्यापारव्यवसायमा असर पर्न सक्छ । नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । पढाइलेखाइमा पनि प्रगति गर्न नसकिने देखिन्छ । मध्य महिनामा विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुनेछ । वैदेशिक क्षेत्र बाट सफलता मिल्नेछ । घर ,जग्गा खरिद तथा बिक्रीको योग छ । शेयर बजारको लगानी पनि फस्टाउनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ३,९ र शुभ रङ्ग पहेँलो वा हरियो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व बगलामुखीको ध्यान गरि आरम्भ गर्दा अत्यन्त लाभ प्राप्त हुनेछ ।
यो महिनामा तपाईंलाई एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । भाग्यले साथ दिनेछ भने काममा सफलता हात पर्नेछ । मठमन्दिरको भ्रमणले काम सम्पन्न गर्न थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ । लगनशीलताले कामहरू अगाडि बढ्नेछन् । सवारी साधन खरिद गर्ने योजना बन्ला । आत्मबल बढाएर काम गरेमा असफल भइँदैन तर महत्त्वकाङ्क्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुपर्छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ३,७ र शुभ रङ्गे रातो वा पहेँलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व श्रीकृष्ण भगवानको स्मरण गरि यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
साउन महिनामा लामो समयदेखि रोकिएको कामको गाँठो फुक्नेछ । कुनै कुराले मनमा शान्ति छाउनेछ । नयाँ कार्य व्यवसायको थालनीका लागि महिना उत्तम रहनेछ । भौतिक सुख मिल्नुका साथै बोलीको प्रभावमा वृद्धि हुने देखिन्छ । अरूको मुख नताकी सही निर्णय लिन सके थप अवसर प्राप्त होला । प्रेम जीवन पनि सुखद् रहनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क २,७ र शुभ रङ्ग सेतो वा खैरो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि सूर्य भगवानको स्मरण गरि कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
यो महिनामा शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ र कुनै कुराले मनमा शान्ति छाउनेछ । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सबल रहनेछ । ठूला व्यक्तिले तपाईंको मेहनतको प्रशंसा गर्नेछन् । शेयर बजारको लगानी फस्टाउनेछ । धार्मिक यात्राको योग पनि छ । २२ गतेबाट राजनैतिक कार्यमा बाधा आउनेछ । स्वास्थ्यमा तथा सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ६,८ र शुभ रङ्ग निलो वा पहेँलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विघ्नहर्ता गणेशजीको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।